इटहरीमा भीषण आगलागी - हाम्रो देश
काठमाडौं – सुनसरीको इटहरी–१२ खनारस्थित तिरूपति प्लाई उद्योगमा सोमबार बिहानैदेखि भीषण आगलागि भएको छ। आगलागिको कारण पत्ता नलागेपनि विद्युत सर्ट भएर हुनसक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
आगलागिबाट उद्योगमा रहेको कच्चा पदार्थलगायत जिन्सिसहित महत्वपुर्ण कागजपत्र जलेर नष्ट भएको इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीले जनाएको छ। आगो निभाउने प्रयास जारी रहेपनि नियन्त्रण बाहिर गएको कारण सर्वसाधरणदेखि सुरक्षाकर्मिहरूको बाक्लो उपस्थिति देखिएको छ।
इटहरी, इनरूवा, दुहबी, धरानलगायतको बारूण यन्त्र, स्थानीय, प्रहरी प्रशासनले आगो नियन्त्रण लिने प्रयास जारी राखेका छन्। यद्यपि आगलागिको कारण के कति क्षति भएको हो सो विवरण प्राप्त भएको छैन। त्यस्तै नकुटा बजार र आसपासको क्षेत्रका वनमा दुई दिन अघिदेखि लागेको भीषण डढेलो आइतबार साँझसम्ममा पनि नियन्त्रणमा आएको छैन ।
डढेलोबाट हालसम्म चार घर जलेर नष्ट भएका छन् । धनकुटा नगरपालिका वडा नं. ८ को टेकुनाला क्षेत्रबाट शनिबार दिउँसो सल्किएको डढेलोबाट वडा नं.७ र ८ को चुलीवन पर्यटकीय क्षेत्र, मगर बस्ती र आसपासका गाउँ अझै पनि जोखिममा रहेका छन् ।स्थानीय धनबहादुर पौडेल र इन्द्रबहादुर रसाइलीको दुई घर र गोठ जलेर पूर्णरूपमा नष्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
जोखिममा रहेका अन्य घरबस्ती जोगाउन शनिबार अपरान्हदेखि धनकुटाका २ सहित धरान, विराटनगर, दमक, तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाको सहित ६ वटा दमकल प्रयोग गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाका एसपी सन्तु देशवारले जानकारी दिए । अहिले पनि धनकुटा–७ चुलीवन, रानीवन, स्वारिफा डाँडा, याक्ते, पेलेक्पाङको माथिल्लो भेग, साङ्ताङको माथिल्लोभेगमा डढेलो लागिरहेको छ ।
डढेलोले भीषण रूप लिएपछि जिल्ला सदरमुकाम धनकुटा बजार र स्थानीयबासी त्रासमा छन् । आगो निभाउनको लागि आधा दर्जन दमकल त भेला भएका छन् तर, डढेलो लागेको जङ्गलसम्म जाने बाटो नहुँदा आगो नियन्त्रण गर्न सकेका छैनन् । बजार क्षेत्रमा आगो सल्किने हो कि भनेर दमकल तैनाथ गरिएको धनकुटा नगरपालिका कार्यालयले जनाएको छ ।
आगो नियन्त्रणको लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाल प्रहरीका सयौं जनशक्ति परिचालन गरिएको छ । यस्तै स्थानीयबासी समेत आगो नियन्त्रणमा खटिएका छन् । हावाको वेग उच्च रहेकोले क्षति बढी भएको धनकुटा–७ का वडाध्यक्ष जङ्गबहादुर राईले बताए । २ घर जल्दा लाखौंको क्षति भएको अध्यक्ष राईले बताए ।
त्यसैगरी धनकुटाको सहिदभूमि गाउँपालिका वडा नं. १ मा डढेलोको कारण आइतबार २ वटा घर जलेर नष्ट भएका छन् । त्रिवेणी सामुदायिक वनमा शनिबारदेखि लागेको डढेलोका कारण नरबहादुर बोगटी र उनका छोरा राजबहादुर बोगटीको टिनको छाना भएको काठको एउटा र फुसको छाना भएको ढुङ्गा–माटोले बनेको अर्कोे घर पूर्णरूपमा जलेको वडा नं. १ का वडासदस्य सोमबहादुर राना मगरले जानकारी दिए ।
आगलागीका कारण बाबुछोराकै गोठ, बाख्राको खोर र ४ वटा बाख्रासमेत जलेको उनले बताए । घरमा रहेको भाँडावर्तन, लत्ताकपडा, खाद्यान्नसहितका सामग्री जल्दा जम्मा ७ लाख बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । आगलागी पीडित परिवार अहिले आफन्तकहाँ बसेका छन् ।
उनीहरूलाई गाउँपालिकासँग समन्वय गरी राहत उपलब्ध गराइने वडासदस्य मगरले बताए ।त्रिवेणी सामुदायिक वनदेखि सुरु भएको डढेलो अहिले खैरेनी सामुदायिक वनको बीच भागमा पुगिसकेको छ । डढेलो नियन्त्रणका लागि स्थानीयसहित प्रहरीले प्रयास जारी राखे पनि हावाहुरीको कारण नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन ।